नेपाली ‘एडिडास’ - Khelpati
नेपाली ‘एडिडास’ फुटबल खेलाडी
पुरा पढ्नुहोस Weight 52 kg Height 1.61 ft Major Awards Birthday 22 Jun
काठमाडौं । कसैले ‘एडिडास’ भने तपाई के सोच्नु हुन्छ ?
कुनै ब्राण्डेड जुत्ता वा खेल सामाग्री कम्पनी ?
तर, यहाँ कुरा गर्न लागिएको प्रसंग कुनै जुत्ता वा खेलसामग्री कम्पनीको भने होईन ।
यो प्रसंग हो नेपाली ‘एडिडास’को ।
यो नाम हो, काठमाडौंमा भएको अन्डर १८ फुटबल फुटबल च्याम्पियनसिपमा विभागीय टिम पुलिसको राईट विङ्गरबाट खेल्ने खेलाडीको ।
अर्थात एडिडास महतको ।
नाम जस्तो ‘युनिक’ छ, मान्छेपनि उस्तै फरक छन् उनी । होचो कदका पातलो खेलाडीको व्यवहारपनि उस्तै छ । उनी हत्तपत्त कोहीसंग बोल्दैनन् । अझ भनौ खुल्दैनन् । बोलिहाले, हल्का मुस्कुराउछन् अनि टाउको हल्लाउछन् । मज्जाले बोल्नका लागि उनीसंग एक दुई दिनको संगतनै गर्नपर्छ ।
उनी आफ्ना टिममेटसंग समेत धेरै बोल्दैनन् । बोल्छन् त कहिलेकाही काम परेका बेला मात्र । सुरुमा पुलिस क्लबमा छनोट हुदाँ एडिडास कसैसंग पनि बोल्दैन थिए । पछि बानी गर्दै गयो, साथीहरु नजिक हुदै गए, अनि मिलनसार बन्दै गए ।
पहिलो पटक ललित स्मृति खेलेका एडिडासको काठमाडौं यात्रा नै पहिलो हो ।
यो यात्रा नै उनका अविष्मरणीय छ ।
जब पुलिसको प्रारम्भिक खेलाडी छनोटमा एडिडास परे । उनी एउटा ठुलो सपना बोकेर काठमाडौं आए, संकल्पको साथ ।
काठमाडौंको शहरमा नयाँ एडिडासलाई कम्ती सकस भएन । कहिले परिवारको समस्या, कहिले आफ्नै अनि कहिले घरपरिवारको सम्झना ।
पुलिसका प्रशिक्षक चेतन घिमिरले जब अन्तिम २० सदस्यीय खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरे । एडिडासले आफ्नो सपना पुरा भएको देखे । अर्थात उनी पुलिसको २० सदस्यीय टोलीमा पर्न सफल भए ।
टोलीमा त परे, अब अर्को सकस सुरु भो, कसरी प्लेइङ सेटमा पर्ने ?
एडिडासले संकल्प गरे, मेहनत गर्ने । सोही अनुसार मेहनत गरे । अन्तिममा उनी पुलिसको सुरुवाती सेटमा अटाउन समक्ष भए ।
ललित स्मृति अन्डर १८ फुटबलमा पुलिसले पहिलो खेल मोरङसंग खेल्यो । सोही खेलसंगै एडिडासले पुलिसको टोलीमा डेब्यु गरे ।
पहिलो खेलमै उनले ९० मिनेट खेले । दुर्भाग्यवस पुलिस पहिलो खेलमा मोरङसंग १–० ले स्तब्ध बन्यो । तर उनले सो खेलमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे । पुलिसका प्रशिक्षक चेतन समेत एडिडासमा भविष्यको स्टार बन्ने सम्भावना रहेको बताउछन् ।
एडिडास, विसं २०५८ भदौ २२ गते चितवनमा जन्मिए । बुबा तिलकबहादुर महत र आमा अनिता महतको कोखबाट । बुवा प्रहरीको जागिरे, एडिडासको जन्मसमेत सयोगवस पुलिस क्याम्पभित्रै हुन पुग्यो । बच्चैदेखि फुटबल खेल्न सिपालु थिए, एडिडास । उनले ८ बर्षको उमेरदेखिनै फुटबल खेल्न सुरुवात गरेका हुन् । उनको एउटै लक्ष्य छ, पुलिसमा उत्कृष्ट खेल्दै धेरै भन्दा धेरै उपाधि जिताउने अनि राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने ।